Mugove wee-commerce kekutanga wakapfuura gumi muzana yekutengesa kuRussia
в Maitiro / mafambiro
Sekureva kweAssociation yeInternet Trade Companies (AKIT), iyo online yekutengesa musika muRussia Federation muhafu yekutanga ye2020 yaisvika 1,654 trillion rubles. Sekureva kwemutungamiriri weAKIT Artem Sokolov, kuvandudzwa kwe e-commerce yazova imwe yematanho makuru mukutengesa, nekuti kune akawanda ezvigadzirwa zvikamu Internet yave ndiyo yega yekutengesa chiteshi.
"Zvinoenderana nezvakabuda muhafu yekutanga yegore rino, e-commerce yakada kuita zvakapetwa kaviri chikamu chekutanga chegore rapfuura, kureva kuti, musika wakawedzera zvakapetwa kana zvichienzaniswa negore rapfuura nemipimo yakafanana," akadaro Artyom Sokolov kumusangano wevatengesi veWorld Retail Russia 2020.
E-commerce musika yakaratidza kukura kwakapinza munaKurume, iro vhoriyamu rakawedzera neanopfuura imwe nehafu nguva kana tichienzanisa naFebruary, kubva pamabhirioni 205,8 emabhirioni kusvika pamabhirioni 316,3. MunaEpril, tichienzanisa nezviratidzo zveKurume, iwo musika wakaratidza kuwedzera kwe9,5% kukura uye kwaisvika 346,1 bhirioni. Nekudaro, iro vhoriyamu re-e-commerce rakadzikira pasi sezvo nyika yakasiya yekuisa vanhu. Muna Chivabvu kufananidzwa naApril - ne9,3% (kusvika 313,9 bhiriyoni rubles), munaChikumi zvichienzaniswa naMay - na11,4% (kusvika pamabhiriyoni 277,9 enguru).
“Mwedzi mitatu umo maive neCOVID yakakanganisa zvakanyanya huwandu hwekutengeswa kwemusika. Izvi zvakatungamira kuchokwadi chekuti tasvika kuchiratidzo chenhoroondo: huwandu hwee-commerce muhafu yekutanga yegore rino munyika medu yakapfuura gumi muzana yekutengesa kwese kwekutengesa. Hatina kumbove nechiratidzo chakadai muhupenyu hwedu, ”akadaro mutungamiri weAKIT.
Nekudaro, nepo musika weRussia uchinge wakasaririra kumashure kweChinese, mugove wee-commerce pane 29,9%. Asi iyo yeRussia yekutengesa pamusika musika yakatouya kuUnited States (13,9%)
Dhata remubatanidzwa rakaratidza kuti zvipfeko neshangu (30,2% yemusika wemuno) yakava chikamu chakakura kwazvo mumusika wee-commerce, pamberi pemidziyo yedhijitari neyemumba (29,5%). Panzvimbo yechitatu kutengeswa kwechikafu pamhepo, chikamu chayo chaive 14,1%.
“Yakanga iri tsika yakanga isingabviri kupotsa. Pazuva rekutanga chairo, apo Mutungamiri wenyika yedu paakazivisa kuti vhiki ye "mazuva ekuzorora" akatimirira, huwandu hwemaodha mune akati wandei ekuendesa chikafu chikafu chakawedzera kakapetwa kashanu, kagumi. Vamwe vavo vaive neiyo "yakawandisa" chiyero zvekuti, zvine mamiriro, rinotevera odha raigona kuendeswa chete muvhiki nehafu, "akawedzera Artem Sokolov.
AKIT inofungidzira kuti pakupera kwegore, iyo Russian e-commerce musika inosvika 2,933 trillion rubles. Gore rakapera, iyo e-commerce musika, sekureva kwesangano, yakaenzana ne2,032 trillion rubles.
Tags: pamusika wekutengesa pamusika
Varimi vekurima veAltai Territory vakachera matani zviuru gumi nezvuru gumi nemashanu
Mbatatisi muU.SA. Kuongorora kwemusika, 2018-2020
PepsiCo inotanga kuvaka chirimwa muNovosibirsk